Ọ dị mma ịtụ anya nke ukwuu n'aka ụmụaka? | Bezzia
Ọ dị mma ịtụ anya nke ukwuu n'aka ụmụaka?
Maria Jose Roldan | 17/09/2021 22:21 | Na-akụziri ụmụaka ihe
Ndị nne na nna niile na -ekwenye mgbe ha na -egosi na ịzụ na ịzụ nwaỌ bụghị ọrụ dị mfe ma na -achọ nnukwu ndidi na ntachi obi. Ụbụrụ nwata na -eto eto na ọ bụ ọrụ nne na nna ime ka nwata ahụ jiri nke nta nke nta, nwee ike ime ihe dị iche iche na -enyere ya aka inwe nnwere onwe ụfọdụ.
Ị ga -ama ka esi enwe ndidi ma ghara ịtụ anya ka nwa gị mụta ihe na nke mbụ ya. Ọtụtụ ndị nne na nna na -ezutekarị ụdị nsogbu a na bụ na atụmanya ha dị elu karịa ka ha dị n'ezie. N'isiokwu na -eso, anyị ga -agwa gị okwu ma ọ bụrụ na ọ dị mma imepụta usoro atụmanya nke ụmụaka.
1 Ọ dị mkpa ịkwanyere nwata
2 Ụmụaka bụ ụmụaka
Ọ dị mkpa ịkwanyere nwata
Ọ dịghị onye a mụrụ amata na ọ bụ ya mere ụmụaka ji achọ enyemaka nne na nna ha ma a bịa n'ịmụta ihe ụfọdụ na ka ụbụrụ ha wee bụrụ nke kacha mma. Ụmụaka ga-abụrịrị ndị nne na nna ha na-eduzi ha oge niile ma a bịa n'ịmụ ihe na ịhụ na n'ime afọ gara aga, ha na-amụta inwe afọ ojuju na ịdabere na ya. Ụmụaka bụ ụmụaka na ndị nne na nna enweghị ike ịtụ anya na oge mbụ ha gbanwere, ha ga -ama ka esi ekwu okwu na isoro ndị ọzọ kwurịta okwu. Nwata bụ usoro dị ogologo nke chọrọ ntachi obi dị ukwuu n'aka ndị nne na nna, ebe ọ bụ na a naghị amụ ihe niile n'otu ụbọchị.
Obi abụọ adịghị ya na ịzụ nwa nwere ike na -agwụ ndị nne na nna ike. N'agbanyeghị ike ọgwụgwụ, ndị nne na nna ga -enwerịrị ndidi na ụmụ ha oge niile ma soro ntuziaka ndị dị mkpa gbasara mmepe na mmụta.
Ụmụaka bụ ụmụaka
Ọ dịghị ihe na -akwụghachi ụgwọ na nkasi obi nye ndị nne na nna karịa ịhụ ka nwa ha na -amụta ihe ọhụrụ kwa ụbọchị. Inwe ike ịhụ ka nwata si eto ma jiri nke nta nke nta na-enwe afọ ojuju ọ bụ ihe magburu onwe ya nye nne na nna ọ bụla. Ọ bụ ihe dị otú o kwesịrị bụ́ ụmụaka imehie ihe ugboro ugboro ruo mgbe ha mụtara ihe. Ọ bụ ihe ebumpụta ụwa ma pụta ụwa na ọ bụghị n'ihi nke a, ndị nne na nna kwesịrị ịkwụsị ma ọ bụ hapụ inwe ndidi.
Childrenmụaka bụ naanị ụmụaka, yabụ na ha kwesịrị ịkpa agwa maka ihe ha bụ. Ndị nne na nna ga -ewepụrịrị atụmanya ndị e mepụtara wee nwee ọ enjoyụ n'oge ụmụaka ha bụ ụmụaka. N'ime afọ ndị gafeworonụ, ụmụaka ga -etolite, usoro mmụta na usoro mmepe ha ga -aga n'ihu ịdabere na nke ha.
Na nkenke, ọtụtụ ndị nne na nna taa na -emehie ihe dị ukwuu n'ịmepụta atụmanya maka ụmụ ha, nke na -emezughị. Ịmụta bụ usoro dị ogologo nke chọrọ ntachi obi dị ukwuu n'aka ndị nne na nna. A ga -ahapụrịrị ụmụaka ka ha mụta ihe n'ụzọ nke ha n'enweghi mmetụta nke ndị mụrụ ha. Ịbụ nwata bụ ọmarịcha oge ndụ, nke ụmụaka na ndị nne na nna kwesịrị ịnụ ụtọ ya nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Na-akụziri ụmụaka ihe » Ọ dị mma ịtụ anya nke ukwuu n'aka ụmụaka?
Imegharị elu: echiche 3 maka imegharị uwe ochie
Jiri ohere patchwork n'ụlọ